Madaxtooyada & Kheyre oo si weyn u taageerayo seddax murashax – Warfaafiye:
Ali Mohyadin Apr 25, 2018 0
Magaalada Muqdisho ayaa laga dareemayaa ololaha doorashada jagada guddoomiyaha baarlamaanka, waxaana si xowli ah u socda dadaalada iyo ololaha oo ay ku lug leeyihiin madam sare oo lugta la gelada xafiiska ra’iisul wasaaraha, madaxtooyada iyo kooxo kale.
Ololaha ugu ballaaran iyo dhaqaalaha ugu badan ee lagu kala furayo xildhibaanada ayaa wuxuu ka imaanayaa Fahad Yaasiin oo ah agaasimaha madaxtooyada oo u ololeynaayo ilaa seddax murashax sidii mid uun ugu soo bixi lahaa.
Dhinacyada kale ee kula loolamaya ayaa halis u arka ololaha ka socda dhinaca madaxtooyada ee uu Fahad Yaasiin wado, waxaana halkaan idiin kugu soo gudbineynaa seddaxda murashax oo kala ah.
1: Musharax Shariif Cabdala, wuxuu ka mid yahay Al Islaax waxaa wata Gudoomiye ku xigeenka Golaha shacabka Cabdiweli Muudeey oo doonaya in uu garab ka dhigto, sidoo kale Agaasimaha Madaxtooyada Fahad Yaasin iyo R/wasaare Khayre ayaa iyugana ku raaacsan maadaama musharaxiinta qaar ku fashilmeen kulamo lala yeeshay,.
2: : Xildhibaan Xaaji Cali Sheekh Maxamed Nuur waaxaa si weyn ugu qanacsan rabana in uu xilkaan ku soo baxo Xildhibaanada R/wasaare Khayre taabacsan ee Jawaari meesha ka saaray, iyadoo uusan meesha ka marneyn Fahad Yaasin oo dhankiisa, qeyb ku leh ololaha muuqda ee murashaxaan, halka xildhibaanada badankood aysan la dhacsaneyn shaqsiyada murashaxaan.
3:Musharax Saalim Caliyow Ibrow ayaa sidoo kale, murashaxnimadiisa qeyb ku leh Agaasimaha Madaxtooyada Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo loo arko shaqsi awood ku leh siyaasadda dalka, gaar haan madaxtooyada. Musharax Saalim Caliyoow Ibroow waxaay ilmo habreed yahiin,Agaasimaha Madaxtooyada Fahad Yaasin waxaana u geeyay Suldaan Warsame Caliyoow ibroow waana shaqsi uu doonayo in hadji uu guuleysto ku gaari karo guul badan.
Inta badan dhaqaalaha iyo kala furfurida xildhibaanada murashaxiintaasi adeegsanayaan ayaa lagu soo waramayaa in si qarsoodi ah u bixinaayo Fahad Yaasiin iyo Ra’iisul wasaare Kheyre oo markaan hal aragti ku wada duulayo.
Wasiirkii Gaashaandhiga Maxamed Mursal oo loo saadaalinayay xilkaan ayaa waxaa meesha ka baxday saadaalintiisii, kadib markii ay isku fahmi waayeen isaga iyo kooxda ololaha u qaabilsan Ra’iisul wasaare Kheyre inay isla meel dhigaan qodobo badan, waxaana loo array wasiir Mursal siyaasi fudeyd badan oo sal laheyn.
Maxamed Mursal ayaa cabasho badan ay kasoo gudbiyeen xildhibaanada qaar, kuwaasi oo ku eedeeyay tixgelin la’aan iyo isla weyni.
Dhanka kale, Waxaa saacadihii u danbeeyay taagnaa muran u dhaxeeyay Wasiirka iyo guddiga doorashada, kadib markii uu diiday inuu xilka wasiirnimo iska casilo, waxaana markii danbe soo farageliyay ra’iisul wasaare Kheyre oo ku amray Maxamed Mursal inuu kala doorto in xilka laga qaado iyo in uu iscasilo, aakhirkiina uu xilka iska casilay.
Sababta uu wasiir Mursal xilka ugu dheganaa ayaa aheyd in haddii uu waayo codka xildhibaanada inuu xilka wasiirka gaashaandhiga sii ahaado, hadii uu guuleystana iska casilo.
Xildhibaano ka madax banaan siyaasadaha isdiidan ee ka socda Muqdisho ayaa qaba in hardi la doorto xubnaha loo ololeynaayo ay rajadii shacabka qabeen dhaawacmi doonto.
Waxaa saacadaha soo socda la filayaa in xildhibaanada qaar ay qaban doonaan kulan ay ugu dhawaaqi doonaan mowqifkooda kuna baaqi doono in laga shaqeeyo masiirka ummadda Soomaaliyeed.
Murcshaxiinta xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka
Heshiiska Berbera waa qeyb ka mid ah istaraatiijiyada isbadalka qaruumaha Geeska…